जम्मू-काश्मीर घटना: भारत विश्वस्तरबाट एक्लिँदै,भारतलाई पाकिस्तानले क्षति पुर्‍याउन सक्छ ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । जम्मू कश्मीरलाई दिइएको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज गरी केन्दशासित प्रदेश बनाउने भारत सरकारको निर्णय बिश्वस्तरबाटै विरोध हुन थालेको छ । जम्मू कश्मीरका विपक्ष दलका नेताहरुलाई हिरासतमा लिने, मोवाइल र इन्टरनेट बन्द गर्ने भारत सरकारको निर्णप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि असन्तुष्टी जनाएको छ ।
जम्मू काश्मीरलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएलगतै पाकिस्तानले एक्शन लिइसकेको छ । दिल्लीस्थित आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ भने कराँचिस्थित भारतीय राजदूत र उच्चायुक्तलाई फिर्ता जान निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसैगरी अर्काे शक्तिशाली राष्ट्र चीनले पनि भारतीय कदमको विरोध गरेको छ ।
कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरिएको, बिपक्ष दलका नेताहरूलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको र राजनीतिक भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाएकोप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चासो देखाएको हो । आइतवारदेखि त्यहाँ फोन र इन्टरनेट बन्द छ ।
उता भारतले अन्तराष्टिय समुदायमा आफ्नो कदमको समर्थन जुटाउने प्रयास गरेको छ । नेपालको समर्थन चुटाउन भारतीय विदेश मन्त्रालयले भारतका लागि नेपाली राजदूतसँग भेटघाट गरेको छ भने नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई जानकारी गराएका छन् ।
काठमाडौमा भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेटेर जानकारी गराएका छन् भने दिल्लीमा नेपाली राजदूतलाई मन्त्रालय बोलाएर परराष्ट्र सचिवले जानकारी दिएका छन् ।
भारतलाई पाकिस्तानले क्षति पुर्‍याउन सक्छ ?
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकले जम्मू–कश्मिरलाई दिइएको विशेष मान्यता खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयका विषयमा छलफल गरेको छ।
पाकिस्तानले भनेको छ–भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध घटाउँछ। भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार निलम्बन गर्छ। यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा लैजान्छ।’ पाकिस्तानले पाकिस्तानको स्वतन्त्र दिवस १४ अगस्तलाई कश्मिरीसँग एकजुटता प्रदर्शन गर्ने रुपमा मनाउने र भारतको स्वतन्त्रता दिवस १५ अगस्तलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउने जनाएको छ। पाकिस्तानले भारतसँग व्यापारिक सम्बन्ध तोड्नेपछि आफ्नो हवाई क्षेत्रको एक करिडोर पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
यो सबै विषयलाई लिएर पाकिस्तान निकै आक्रोशित भएको छ। तर पाकिस्तानको यो घोषणाको अर्थ के हुन्छ। पूर्व कुटनीतिज्ञ शरत सभरवाल पाकिस्तानको यो निर्णयलाई प्रतिकात्मक कदम ठान्छन्। उनले भने–सरकारले जनताको प्रतिक्रियाको जवाफ दिइरहेको छ। विगत दुई दिनमा पाकिस्तान सरकारलाई आफ्नो जवाफ तय गर्न समस्या भइरहेको थियो। सरकार र विपक्षीमा एकता देखिएको थिएन। जहाँसम्म व्यापारको कुरा छ, पुलवामा आक्रमण र बालाकोट एयसस्ट्राइकपछि भारतले पाकिस्तानी निर्यातमा दुई सय प्रतिशत कर बढाएको थियो।’